Joojin Qandaraaska Shirkadaha Dawladda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Joojin Qandaraaska Shirkadaha Dawladda
Uppdaterat fredag 21 januari 2011 kl 10.55
Publicerat fredag 21 januari 2011 kl 09.15
Dawladda ayaa laga cabsi qabaa inay mar kale guul-darro ka raacdo go’aan ka soo baxa baarlamanka, maadaama uu xisbiga Isveeriyedimoqoraadigu sheegay inuu u codeeyn doono mooshin lagu joojinayo qandaraaska shirkadaha dawladda ee poostada, Telia Sonera, SBAB iyo Vattenfall.
– Xubnaha xisbiga u matala baarlamanka ayaa go’aan ku gaaray in haa loogu codeeyo mooshinka sida uu u qoran yahay. Wax lala yaabo ayay noqon lahayd haddii shirkadda quwadda ee Vattenfall uu mulki u yeesho dal kale, tusaale ahaan waddan ka mid ah waddammad dhaca bariga dhexe. Waa shirkad muhiimad ugu fadhida bulshada, sida uu sheegay Lars Isovaara.
Xubnaha baarlamanka ayaa horay dawladda ugu ansixiyay ogolaansho inay dawladdu ku dhaqaaqi karto tallaabooyin lagu qandaraasayo shirkadaha Posten Norden, Telia Sonera iyo bankiga SBAB, sidii loo dhimi lahaa saamiga dawladdu ku leedahay shirkadahaa.
Dawladda ayaa sidoo kale ku soo bandhigtay miisaaniyadda sannadka in la dhimo saamiga dawladdu ku leedahay shirkadda Vattenfall, hase yeeshee iminka laga yaabo in baarlamanku aqlabiyad ugu codeeyo sidii awoodda dawladda horay loo siiyay dib loolgala soo noqon lahaa.
Xisbiyada Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Doogga ayaa baarlamanka u gudbiyay mooshin ka dhan ah ee dib loogala soo noqonayo dawladda awoodii horay loogu siiyay inay qandaraas ku iib-geeyso shirkadaha wada-jirka loo leeyahay, mooshinkaasina oo ay taageereen xubnaha xisbiga Isveeriyedimoqoraadigu iyo in la mamnuuco iibinta shirkadaha SBAB iyoVattenfall. Iyadoona danta laga leeyahay tahay in maamulka shirkadahaa ay gacanta ugu sii jirto maamulka dawladda, sida ay sheegtay Maia Wetterstrand, kana mid ah labada hogaamiye ee xisbiga dooggu.
– Vattenfall waa shirkad aan lahaanshaheeda u aragno mid muhiimad ugu fadhiya bulshada sidoo kale shirkadda SBAB, oo aan u aragno iney jiraan shirkado bulshadu leedahay ee u adeega bulshada, sidaa waxaa sheegtay Maria Wetterstrand.
Xisbiga Bidixda ee Vänster ayaa sidoo kale looga fadhiyaa inuu mooshinkaa taageero. Si baarlamanku aqlabiyad ugu codeeyo mooshinkaa ka dhanka ah dawladda. Kent Persson kana mid ah xubnaha baarlamanka u matala xisbiga Bidixda ee guddiga manaafacada ayaa sheegay inuu xisbigiisu ka tashan doono, maadaama su’aashani ka mid tahay arrimmaha xisbigiisu taabacsan yahay.
– Waa mooshin xiiso leh. Wuxuu mooshinkani ku yaalaa wadnaha xisbiga. Waxaan middaa kala xaajoon doonnaa xisbiyada Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo Doogga, sida uu sheegay Kent Persson.